Xafiiska Caafimaadka MHS | Dugsiyada Dadweynaha Minnetonka
Xafiiska Caafimaadka wuxuu ku yaal dabaqa koowaad ee ka soo horjeedka Adeegyada Taakulaynta Ardayda.
Ardayda xanuunsata inta lagu jiro maalinta iskuulka waa inay iska xaadiriyaan Xafiiska Caafimaadka. Ardayda soo sheegta inay ku qaateen mudada qolka jiifka lama siin doono maqnaansho cudurdaar ah. Caafimaadka Para ayaa go'aamin doona haddii ardaygu ku sii nagaado dugsiga ama inuu guriga aado. Haddii la ogaado in ardaygu aad u jiran yahay oo uusan ku sii jiri karin dugsiga, waaxda caafimaadka ayaa la xiriiri doonta waalidka / ilaaliyaha ama qofka loo magacaabay qofka lala xiriirayo xaaladaha degdegga ah. Ardaydu waa inay ku jiraan lambar degdeg ah oo feyl ku jira Xafiiska Caafimaadka.
Xusuusin: Dhammaan daawooyinka (rijeetada lagu qoro iyo tan miiska laga soo iibsado) waa inay ku jiraan warqad ka socota dhakhtarka iyo ogolaanshaha waalidka Ardaydu waa inay ka baxaan oo ay ku qaataan dhammaan daawooyinka xafiiska caafimaadka.